AutoCAD 2013 Mazava ho azy - Geofumadas
Fepetran'ny geometrika 12.1
Araka ny efa noresahintsika teo, ny sakantsakan'ny jeometrika dia mametraka ny fandaminana sy ny fifandraisan'ny zavatra misy eo amin'ny lafiny hafa. Andao hojerentsika tsirairay avy: 12.1.1 Ny fifanandrifian-javatra Io faneriterena io dia manery ny zavatra faharoa voafantina hifanaraka amin'ireo teboka sasantsasany amin'ireo teboka amin'ilay zavatra voalohany. Rehefa mampihetsika ny mpifantina zavatra isika, manasongadina ny Autocad ...
AutoCAD 2013, Free Courses
TOKO 12: FITSARANA PARAMETRIKA
Rehefa mampiasa teboka fiafarana snap, na afovoany ohatra isika, ny tena ataontsika dia manery ny zavatra vaovao hizara teboka amin'ny haibolony amin'ny zavatra iray hafa efa voasintona. Raha mampiasa referansa "Parallel" na "Perpendicular" isika dia mitovy ihany ny zava-mitranga, dia terenay ny fandaminana geometrika an'ilay zavatra vaovao mah ...
CHAPITRE 11: TRAVELING POLARINA
Andao hiverina amin'ny dinika "Paramères Drawing". Ny takelaka "Polar Tracking" dia ahafahanao manamboatra endrika iray mitovy anarana. Ny "Polar Trace", toy ny "Object Snap Trace", dia mamorona tsipika misy teboka, fa rehefa miampita ny zoro voatondro na ny fampitomboana azy ny kursor, na avy amin'ireo fandrindrana ...
TOKO 10: FAMPIASANA NY FITSIPIKA NY FIFANEKENA
Ny "Object Snap Trace" dia fanitarana sarobidy amin'ireo fisehoana "Object Snap" ho an'ny sary. Ny asany dia ny fametahana andalana vonjimaika izay azo alaina avy amin'ny "Reference Referensi" mba hanamarihana sy hahazoana teboka fanampiny mandritra ny fampiharana ny baiko fanaovana sary. Izany hoe, raha ...
Ny fanondroana ireo zavatra toa ny "From", "Midpoint eo anelanelan'ny teboka 2" ary ny "Extension" dia ahafahantsika mahatakatra ny fomba ahafahan'ny Autocad manondro ireo teboka izay tsy mifanandrify velively amin'ny géometry ny zavatra efa misy fa azo avy aminy, hevitra iray nampiasaina namolavola fitaovana fanaovana sary hafa antsoina hoe "Point Sivana" izay ...
Na dia efa nandinika teknika maromaro aza izahay mba hitazomana tsara ireo zavatra samy hafa, amin'ny fampiharana, rehefa miha sarotra kokoa ny sary, dia matetika no foronina ireo zavatra vaovao ary hita hatrany izay mifandray. Izany hoe, ny singa efa misy ao amin'ny sary dia manome antsika referansa geometrika ho an'ireo zavatra vaovao. Amin'ny ...
Amin'izay hitantsika hatreto dia fantatray fa ny "misintona" andalana sy mamorona lahatsoratra an-tsipika iray dia asa azo atao haingana sy mora ao amin'ny Autocad. Raha ny marina dia izay ihany no ilaina mba hamoronana latabatra mora sy haingana, atambatra, ohatra, ny tsipika na ny polyline misy zavatra an-tsoratra mandra-mamorona ...
8.4 andalana marika
Amin'ny tranga maro, ny sary dia tsy mila teny famaritana iray na roa fotsiny. Amin'ny tranga sasany, na izany aza, ny naoty ilaina dia mety ho andalana roa na maromaro. Ka ny fampiasana ny tsipika andalana iray dia tsy miasa mihitsy. Fa kosa lahatsoratra multiline no ampiasainay. Ity safidy ity dia ampidirina miaraka amin'ny ...
Ny fomba fiteny dia ny famaritana fotsiny ireo karazana typografika isan-karazany amin'ny anarana iray. Ao amin'ny Autocad dia azontsika atao ny mamorona ny style rehetra tadiavintsika amin'ny sary ary avy eo afaka ampifandraisintsika amin'ny fomba manokana ny sary tsirairay. Ny fetra voafetra momba an'io fomba io dia ny fitehirizana ireo fomba namboarina ...
8.2 Fanitsiana lahatsoratra
Manomboka amin'ny toko faha-16 dia miady amina lohahevitra mifandraika amin'ny fanitsiana ny sary isika. Na izany aza, tsy maintsy hitantsika eto ny fitaovana misy amin'ny fanitsiana ireo zavatra soratra vao noforonintsika satria tsy mitovy ny an'ny natiora sy ny an'ny zavatra hafa. Ahoana ny fahitana azy ...
8.1.1 Sava amin'ny lahatsoratra
Ireo zavatra an-tsoratra dia mety ahitana soatoavina miankina amin'ny sary. Ity toetra ity dia antsoina hoe "Field text" ary manana tombony izy ireo fa ny angon-drakitra asehon'izy ireo dia miankina amin'ny toetran'ny zavatra na ny masontsivana ifandraisany, noho izany dia azo havaozina izy ireo raha miova. Raha lazaina amin'ny fomba hafa,…
8.1 Text amin'ny tsipika
Amin'ny tranga maro, ny anotasy amin'ny sary dia misy teny iray na roa. Mahazatra ny mahita amin'ny drafitra maritrano, ohatra, ny teny toa ny "Kitchen" na "North Facade". Amin'ny toe-javatra toy izao dia mora ny mamorona sy mahita ny soratra amin'ny tsipika. Ho an'izay dia afaka mampiasa ny baiko "Text" na ny bokotra ...
TOKO XENOMA: TEXT
Tsy tapaka, ny lahatsoratra dia tsy maintsy ampiana amin'ny sary mari-trano, injeniera na mekanika rehetra. Raha drafitra an-tanàn-dehibe, ohatra, dia mety tsy maintsy ampidirinao ny anaran'ireo arabe. Ny sarin'ireo faritra mekanika matetika dia misy naoty ho an'ilay atrikasa ary hisy ny hafa izay, farafaharatsiny, misy ny anarana ...
Toy ny tranga teo aloha, dia mampiasa fomba fiasa mitovy amin'izany izahay mba hametrahana ny mangarahara amin'ny zavatra iray: mifidy azy izahay ary avy eo mametraka ny soatoavina mifanaraka amin'izany avy amin'ny vondrona "Properties". Na izany aza, marihina eto fa ny sanda mangarahara dia tsy tokony ho 100% mihitsy, satria hahatonga ilay zavatra tsy ho hita io. Too ...
Ny hatevin'ny tsipika dia io, ny sakan'ny tsoratry ny zavatra iray. Ary toy ny tamin'ny tranga teo aloha, dia azontsika atao ny manova ny hatevin'ny tsipika zavatra iray miaraka amin'ilay lisitra mitete ao amin'ny vondrona "Properties" an'ny "Tab" Home. Manana boaty fifanakalozan-kevitra ihany koa izahay hametrahana ireo masontsivana voalaza ...
7.2.1 Ny alfabeta amin'ny tsipika
Na izany aza, tsy olana ny fametrahana karazana tsipika samihafa amin'ny zavatra tsy misy masontsivana. Raha ny marina, araka ny hitanao amin'ny anaran'ny linetype sy ny famaritana ao amin'ny varavarankely "Linetype Manager", maro amin'ireo linetypes no manana tanjona mazava tsara ao ...
7.2 Karazana andalana
Ny karazana linet an'ny zavatra iray dia azo ovaina ihany koa amin'ny alàlan'ny fisafidianana azy amin'ny lisitra milatsaka ambany ao amin'ny vondrona Properties eo amin'ny tabilao Home, rehefa voafantina ny zavatra. Na izany aza, ny fananganana voalohany an'ny Autocad ho an'ny sary vaovao dia tsy misy afa-tsy karazana tsipika mivaingana. Ka manomboka, tsy betsaka ny ...
Rehefa misafidy zavatra iray isika dia asongadin'ny boaty kely antsoina hoe grips. Ireo boaty ireo dia manampy antsika, ankoatry ny zavatra hafa, mba hanitsy ireo zavatra araka izay hianarantsika ao amin'ny toko 19. Tokony holazaina eto izy ireo satria raha vao nifantina zavatra iray na maromaro isika ary, noho izany, "grips" ankehitriny, azo atao ny manova ny ...